စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဘယ်အပိုင်း ကို သင်စိတ်ဝင်စားသလဲ ? | မာသင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဘယ်အပိုင်း ကို သင်စိတ်ဝင်စားသလဲ ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍအားလုံးကို သင်စိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးကို တော့လုပ်ချင် လုပ်နေရပေမယ့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုယ် အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်အဝင်စားဆုံးအပိုင်းကို သိခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသောအပိုင်းများကိုလဲ အလေးထားအာရုံစိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရဲ့ဘယ်အပိုင်း ကို သင်စိတ်ဝင်စားသလဲ။ မန့်ခဲ့ပါ။
၂။ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး အပိုင်း
၄။ ဝန်ထမ်းရေးရာ အပိုင်း
၅။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပိုင်း
၆။ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း
၈။ ဦးဆောင်မှု အပိုင်း
၁၁။ နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာအပိုင်း
၁၂။ စက်ပစ္စည်းနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း
၁၅။ ယဉ်နှင့်ကားများ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း
၁၆။ စားသုံးသူ ဝန်ဆောင်မှု အပိုင်း
၁ရ။ စားသုံးသူစောကဒ ဖြေရှင်းမှုအပိုင်း
၂၁။ ကုန်ပစ္စည်းသစ်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းအိုင်ဒီယာ တီထွင်ဖန်တီးမှုအပိုင်း
၂၃။ သန့်ရှင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးအပိုင်း
၂၄။ ဆောက်လုပ်မှုနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း
၂၅။ လုပ်ငန်းခွင် အန္တာရာယ်ကာကွယ်မှုနှင့် အာမခံအပိုင်း
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းက တစ်ခုထက်ပိုနိုင်ပါတယ်။ မန့် သာမန့်ခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာလဲ။
အထက်မှာ မပါဝင်တဲ့အပိုင်း များလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ မန့်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှု နောက်ကို မလိုက်ပဲ တန်ဖိုးနောက်ကို လိုက်ပါ။
တန်ဖိုးရှိရင်.… အောင်မြင်မှုက နောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။
အောင်မြင်မှု နောက်ကို မလိုက်ပဲ တန်ဖိုးနောက်ကို လိုက်ပါ။တန်ဖိုးရှိရင်.… အောင်မြင်မှုက နောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။မာသင် တန်ဖိုးနောက်ကိုလိုက် ဝန်ထမ်းလောက...
“Learn more to earn more”ငွေပိုဝင်ဖို့ ပိုလေ့လာပါ။
"Learn more to earn more"ငွေပိုဝင်ဖို့ ပိုလေ့လာပါ။ ဝင်ငွေပိုဝင်ခြင်း နဲ့ စာဖတ်လေ့လာခြင်း ဆိုတာ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။အောင်မြင်ချင်သလား၊ အောင်မြင်ခြင်းကို အရင်လေ့လာပါ။ရောင်းကောင်းချင်သလား၊ ရောင်းကောင်းခြင်းကို အရင်လေ့လာပါ။ကျန်းမာချင်သလား၊ ကျန်းမာခြင်းကို...
မှန်ကန်သောလေ့လာမှု နည်းလမ်း (Active learning Vs Passive Learning) နားထောင်ယုံမျှ သည် မေ့လျော့ခြင်းတွင် အဆုံးသတ်သည်။ကြည့်ယုံမြင်ယုံမျှသည် မှတ်မိခြင်းတွင်အဆုံးသတ်သည်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြုလုပ်ခြင်း သည် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း တွင်အဆုံးသတ်သည်။ကွန်ဖြူးရှပ်I hear and I forget.I...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝယ်လိုအားကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း ပညာရပ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝယ်လိုအားကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း ပညာရပ် (Strategic Forecasting) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း ဝယ်လိုအားကို ခန့်မှန်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ထမင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကလဲ မနက်ဖြန် အတွက် ဝယ်လိုအားကို ခန့်မှန်းပြီး ဒီနေ့ထမင်းဘယ်နှစ်အိုးချက်မယ်၊ ဟင်း ကို...
သင် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိရဲ့လား It is not the strongest of the species that survives,Nor the most intelligent that survives.It is the one that is the most adaptable to change.Charles Darwinချားဒါဝင် က ကမ္ဘာဦးကစလို့သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာ အခုချိန်ထိ ရှင်သန်...
ရည်မှန်းချက်ကို သံကြိုးခတ်ထားခြင်း သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်၊ဆင်တင်းကုတ်ထဲမှာ။သူ့ကိုလှောင်ပိတ်လဲမထားဘူး။ဘယ်အရာနဲ့မှ လဲ ကာရံထားတာ မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့စရိုက်သဘာ၀ ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဆင်တစ်ကောင်၊ နေရာအနှံတောတောင်တွေမှာ သွားလာနေတဲ့ဆင်တစ်ကောင်အဖြစ်...
ကျောက်တုံးပုံပြင်(သို့) ဘဝအတွက် သင်ခန်းစာ
ကျောက်တုံးပုံပြင်(သို့) ဘဝအတွက် သင်ခန်းစာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်း မြန်မာစာဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပညာပေးပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို အထပ်ထပ်အခါခါ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။အဲဒီပုံပြင်လေးက ဒီလိုပါ။ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးက ရုပ်ဖျက်ပြီး...
မာသင် ၏ ခံယူချက်
တစ်နှစ် လူတစ်သန်း မျှဝေမည်
စီးပွားရေးအသိပညာများကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပညာလိုလားသူ လူပေါင်းတစ်သန်း ကို မျှဝေသွားမည်။
[email protected] Marthin. 2021 All Right Reserved.
Powered by MISL.